Doorashada Mareykanka ee 2020: Trump iyo Biden Midkee ku horreeya Saadaasha guusha? | Aftahan News
Doorashada Mareykanka ee 2020: Trump iyo Biden Midkee ku horreeya Saadaasha guusha?
USA(aftahannews):- Shacabka Mareykanka ayaa 3-da bisha November ee sannadkan go’aan ka gaadhi doona in Donald Trump uu muddo afar sano ah oo kale kusii sugnaan doono xafiiska madaxweynaha ee Aqalka Cad iyo inkale.
BIDEN AND TRUMP 2020
Haddaba, waxaan isbarbardhig ku sameyn doonnaa sida ay codadka la saadaaliyey u kala heli karaan amma u kala heleen ee ka bogasho habboon:-
Waa sidee xaaladda Musharraxiinta Madaxweynaha ee ee Maraykanku?
Haddase Biden ayaa aad uga horreeya madaxweyne Trump.
Way sahlan tahay in gaashaanka lagu dhufto saadaasha, iyadoo tusaale loo soo qaadanayo sida ay ugu khaldameen saadaashii ay shirkadaha sameeyeen xilligii doorashii 2016-kii. Madaxweyne Donald Trump mar walba sidaas ayuu u dhaliilaa saadaalinta. Laakiin gabi ahaanba run ma aha.
Codbixinta doorashadii 2016-kii waxay la kulantay cillado farsamo – gobollada ugu muhiimsan qaarkoodna goor dambe ayaa la ogaaday in uu ku guuleystay Mr Trump. Inta badan hay’adaha saadaasha sameeya wax saxeen cilladahaas hadda.